Isona sikhulu Sokukhangela Izixhobo Zokwenza Izinto Ngokutsho kweSemalt
Ukukhutshwa kwesikrini, kwaziwa nangokuthi ukukhwa kwewebhu, kuya kunceda ulande ngokuzenzekelayo iimibhalo, imifanekiso kunye nezinye iintlobo zomxholo ezivela kwiindawo ezahlukeneyo. Iingcali ezibhala iinkqubo ezinjalo kufuneka zijongane nabathengi abaninzi kwiindawo zonke zehlabathi, yingakho ziye zavelisa izixhobo ezahlukeneyo zokuchithwa kwedatha ukuze zithole i-best scraping data. Kwaye ezinye zeenkampani ezinkulu kunye neenkampani ezidumileyo zithembele izixhobo zokucoca kwesikrini ukuze zikhishwe iinkcukacha ezisebenzayo ezivela kumnatha. Inxalenye ephambili kukuba le nkqubo ingasetyenziselwa imihla ngemihla, ngeveki, okanye ngeenyanga ngaphandle kwengxaki. Ukusebenzisa iiprogram ezithile zokukhutshwa kwesikrini okanye izixhobo, unokwazi ukufumana idatha kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo kwaye unikezele kubaxumi bakho nayiphi na ifomathi. Ezi zixhobo zokutshiza ziye zaphuhliswa iminyaka kwaye ngoku ziyakwazi ukusingatha iintlawulo zewebhu ngexeshana - business intelligence reporting platform. Ukuwasebenzisa, unokukwazi ukusingatha iiprojekthi ezininzi kwaye ukhupha amaninzi amaninzi njengoko ufuna. Ngaphezu koko, unako ukugcina idatha efunyenwe kwiifomu ze-API okanye ze-CSV.
Ezi zixhobo ezine ezikhethiweyo zesikrini ziza kugcina zombini ixesha kunye namandla ohlala uchitha kwi-extraction data:
Enye enye inamandla kwaye iyamangalisa inkqubo yokukrazula kwesikrini. Iyakwazi ukugcina iitoni zeedatha kwaye ziyilungiselele ukusetyenziswa kwe-intanethi. Unokufakela ngokukhawuleza ibhukhimakhi ye-Kimono Browser kwaye uguqule idatha engaqinisekanga kwiifom ze-CSV okanye ze-JSON.
3. I-Screen Scraper
Ukukrazula kwesikrini ngenye yezona zibalulekileyo ezibalulekileyo zokuhamba kwedatha. Isenza sikwazi ukusebenzisa ngokufanelekileyo iindlela zokusebenza zanamhlanje. Kukhuselekile ukuthetha ukuba kukho iindlela ezahlukeneyo zokudala nokugcina idatha, kodwa akukho nto ibhetele kunokuba zixhobo zokutshiza isikrini. Inxalenye engcono kukuba le software isebenza kuzo zonke iiphequluli zewebhu, kuquka i-Chrome, Firefox ne-Internet Explorer. Iyakwazi ukudibaniswa nezobuchwepheshe be-Flash kunye ne-Silverlight, kunye nezicelo zakho zoshishino njengeSiebel, PeopleSoft, ne-SAP.